रुपन्देहीलाई नेपालगञ्ज गोल्डकपको उपाधि – Khel Dainik
रुपन्देहीलाई नेपालगञ्ज गोल्डकपको उपाधि
बाँके (खेलदैनिक) । टुबोर्ग तेस्रो नेपालगञ्ज गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधी साविक विजेता लाली रुपन्देही–११ ले जित्न सफल भएको छ । यो उपाधिसँगै रुपन्देहीले गत संस्करणमा जितको उपाधि रक्ष ागर्न समेत सफल भएको छ ।
गतवर्षकै फाइनलिष्ट संकटा क्लव, काठमाडौंलाई १–० गोलले पाखा लगाउदै रुपन्देहीले लगातार दोस्रो पटक नेपालगञ्ज गोल्डकप जितेको हो । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा रुपन्देहीका जोन ग्लोरीले ५३ मिनेटमा गरेको गोल नै खेलको निर्णायक बन्न पुग्यो ।
विजेत ाबनेको रुपन्देहीले उपाधिसहित नगद पाँच लाख रुपैया पुरस्कार पाएको छ । त्यस्तै उपविजेत ाबनेको संकटाले दुई लाख पचास हजारमा चित्त बुझाएको छ । त्यसैगरी प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी रुपन्देहीका कप्तान दिपक गुरुङ भएका छन् । उनले सुजुकी मोटरसाइकल प्राप्त गरे ।
त्यस्तै, उत्कृष्ट गोलकिपर रुपन्देहीका राजाबाबु मगर, रक्षकमा रुपन्देहीकै युद्ध शाही, मिडफिल्डरमा संकटाका सौजन राई र उत्कृष्ट फरवार्ड संकटाकै शान्त गुरुङ भएका छन् । उनीहरुले सबैले दश–दश हजार रुपैया प्राप्त गरे ।
प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित लाली रुपन्देही–११ का कप्तान दिपक गुरुङ आफूले प्राप्त गरेको मोटरसाइकलका साथ ।
विजेता र उपविजेता टीम, उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शमशेर राणा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले पुरस्कार वितरण गरे । विधागत उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपति, नेपालगञ्जकी उपमेयर उमा थापा, कोहलपुरकी उपमेयर सन्जुकमारी चौधरी, खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया विकलगायतले पुरस्कार वितरण गरे ।
सो अवसरमा मेयर डा. राणा, बाँके फुटबल संघका अध्यक्ष भोजराज शाही, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपतिले विजयी टीमलाई बधाई दिदै खजुराका जनताले देखाएको अनुशासनको प्रसंगा गरे ।
नेपालगञ्ज रंगशाला आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि मर्मत भइरहेपछि गोल्डकप खजुराको डीगाउँमा गरिएको थियो । संघका अध्यक्ष शाहीले नेपालगञ्ज रंगशालाको विकल्प खजुराको मैदान हुन सक्ने बताए । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपतिले खजुरामा रंगशाला बनाउन सक्दो गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।
← जावलाखेललाई हराउँदै झापा सेमिफाइनलमा उपाधिका लागि एपीएफ र आर्मी भिड्ने →
प्रतिष्ठित इलिट वुमन रेफ्री प्यानलमा अन्जना जेष्ठ २६, २०७५
किरनको टोली माजियाको लगातार दोस्रो जित जेष्ठ २६, २०७५
रोहितको टोलीसँग रोनाल्डिन्होको टिम पराजित जेष्ठ २६, २०७५
एभनिरलाई हेमजा गोल्डकपको उपाधि जेष्ठ २६, २०७५
एन्फा उपाध्यक्ष केसीलाई गृहजिल्लामा भव्य स्वागत जेष्ठ २६, २०७५
मैत्रीपूर्ण खेलमा एनआरटीको रोमाञ्चक जित जेष्ठ २६, २०७५